Firifiry ny Holandey no mbola afaka mandoa ny volany mandritry ny krizy corona? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 21 May 2020	• 14 Comments
Raha manaraka ny haino aman-jery ianao, dia tsy misy olana any Holandy, afa-tsy ny viriosy corona, izay mbola miboridana toy ny baomba mandrehitra fotoana. Aiza ny asa fanaovan-gazety rehefa mampiseho ny fijalian'ny tena manokana ao ambadiky ny varavaran'ny vavahadin'ny maro? Tsy sarotra ny manadihady tarehimarika RIVM ary manasongadina ny andaniny roa. Ny haino aman-jery mahazatra dia miaro ny politikan'i Rutte & Co. ary i Jensen izay milaza fa tsy dia ratsy izany. izany fandaharam-potoana maharitra dia hoe mbola hisy fifohazana hafa aorian'izay dia ho vita ny fanjakana ny polisy ary ho voasava daholo izay rehetra manakiana. Fa maninona no tsy misy miraharaha ny fahasahiranana manokana sy ara-bola?
Raha ampiharina, ireo fonosam-panohanana nampanantenaina lehibe indrindra dia ho fanontanian'ny mpifaninana, izay handefasana anao amin'ny counter A hanoherana B. Amin'ny lafiny manokana 433.000 XNUMX freelancer dia ho lefoka, satria ny fanohanana TOZO ataon'izy ireo manomboka ny 1 jona dia hosedraina hanoherana ny vola miditra ny mpiara-miasa dia vita io fa tsy eo. Ary na dia mahazo fanohanana aza ianao, maro (ao anatin'izany ireo olona tsy manana asa) no mety hahita fa mety hisy fahavoazana kely ny fidiram-bola kely raha mandoa ny hofan-trano. Hitan'ny governemanta fa milahatra ny olana eto, ka ny drafitra dia ny hametraka trano maimaimpoana vetivety, saingy efa izany Kajsa Ollongren torpedoed.
Toy izao ny fandehan-javatra amin'ny politika: ny tsipika mena dia efa naorina hatrizay, fa manao zavatra sasany ianao momba ny 'anjarantsika' na 'manohitra azy izahay'. Izany no fitohizan'ny demokrasia izay iainantsika. Nilaza i Ollongron fa ho an'ny orinasa trano ny fijanonana trano, satria kely kokoa ny vola azony ampiasaina amin'ny fananganana vaovao. “Tian'ny kabinetra ny hanomezana vahana ny tompon-trano hanome vahaolana mahazatra. Ohatra, afaka manome ny mpanofa ny fanemorana ny fandoavam-bola izy ireo, hanafoana ny ampahany amin'ny hofany aorian'izay na mampihena ny hofan-trano, ”hoy i Kasja. Te-hanamora ny trano kely ihany koa i Ollongren. Ny volavolan-dalàna vaovao izay hanangana fampiharana indray dia mamela izany.
Lalàna iray hafa. Manodidina ny sofintsika ny lalàna fa raha ny tena izy dia mijanona ho an'ny orinasan-trano ihany no mampihena ny hofan-trano. Ary mety hataon'izy ireo fatratra tokoa (tsy).
Mazava ho azy fa ny tena olana dia amin'ireo olona izay tsy afa-milanja intsony ary mety ho iray na roa volana aoriana. Tsy fantatsika satria tsy misy olona mikaroka azy io. Te-hitazona ny fijaliana ao anaty fiaraha-monina eo ambany karipetra ianao. Tsara ny fampihenana ny hofan-trano, fa inona no ataonao manoloana ireo masoivoho mpanangona sy tsy voahaja izay mametraka vola be goavambe amin'ny kaonty efa be loatra? Ny fampandoavam-bola mandritra ny iray volana dia mety hitarika haingana amin'ny Euros an-jatony amin'ny vidin-javatra fanampiny, hany ka hidina lavitra kokoa ianao amin'ny volana manaraka.
Avy eo, misy ny fihetsik'ireo olana eo amin'ny olana, izay ahatantazana anao ara-bola, fa io dia mety hitarika amin'ny fikarakarana ny tanora koa tonga ary hojerena raha tsy afaka apetraka tsara miaraka amin'ny fianakavian'ny mpitaiza ny zanakao, satria tsy ao intsony ianao. karakarao izy.
Raha ny fihenan'ny vola (noho ny vola an'arivony tapitrisa) dia hisy fiantraikany amin'ny vidiny any amin'ny tranombarotra ary raha mitombo ny hetra mandritra ny fotoana maharitra, satria ny kitapom-panampiana dia tsy maintsy alaina any ho any, arakaraka ny betsaka no hisedra olana.
Mazava ho azy fa misy ihany koa ny mahasoa. Ireo dia olona miasa ho an'ny rafitra ary manatanteraka ireo asa fanaraha-maso sy fampiharana ireo rehetra ireo. Azonao atao angamba ny maka asa goavana amin'ny maha-inspektera RIVM anao, izay handefasana anao eny an-dàlana hizaha toetra ny olona amin'ny corona na hahitana raha mifikitra amin'ny metatra sy sasany ny olona. Mety misy orinasa mpanolo-tsaina manana traikefa ambony satria mitarika ny orinasa sy manoro hevitra azy ireo ny fomba handaminana ny orinasany amin'ny fiaraha-monina iray sy sasany metatra. Arakaraka ny olona miasa ho an'ny governemanta, semi-government na ho an'ny orinasa izay manome serivisy mifandraika amin'izany dia maro kokoa ny olona hahazo tombony amin'ny fifehezana sy ny fanasaziana ilay vondrona izay tsy mbola miasa ho an'ny rafitra.
Hafiriana mandra-pahitan'ny Holandey an'io dia niemand ho famonjena ve izy? Mandra-pahoviana ny olona izay miasa ho an'ny rafitra dia mijery tsara ny fitaratra tsy mahita fahamenarana lalina? Eny ary, raha mbola ampahany amin'ny maro an'isa ianao dia afaka mahazo ny trosa iombonana miaraka amin'i Meiland fa tsy hiady ho an'ny firenena afaka. Rahoviana no hahita ny olona fa miaina ao anaty demokrasia mahamenatra isika, izay ny mpanao politika nandritra ny taona maro no nanehoana ny hevitry ny safidintsika, fa hanaraka an-tsokosoko ny lohahevitra lehibe izay tsy maintsy manelingelina ny vahoaka? Ny fomba tokana hivoahana amin'ity toe-javatra ity dia tena revolisiona, izay anaovan'ny vahoaka fahefana.
Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny demokrasia mivantana. Amin'ny demokrasia mivantana, ny minisitra nofidian'ny vahoaka dia mitatitra ny vahoaka. Izy ireo no mamaritra raha ny volavolan-dalàna no nolovana, ny lalàna lehibe indrindra fa tsy misy lalàna tokony hanimba na hanala ny zo fototra ao anaty lalàmpanorenana iray. Noho izany, ny zavatra rehetra manitsakitsaka ny fiainana manokana sy amin'ny vatana ary ny mpikambana dia tsy afaka miditra am-perinasa ho toy ny lalàna (na dia lalàna iray momba ny vaksiny tsy maintsy atao aza). Ny demokrasia mivantana dia apetraky ny vahoaka amin'ny alàlan'ny tsy fanaovana tsinontsinona ny politika tsy mitongilana ary manangana rafitra vaovao. An-jatony ny olona tsy maintsy mampiseho fa te hanao izany. Izany no antony ilantsika mikomy sy mampiseho fa maniry ny hiova isika. Tsy afaka ny hahatratra ny tena revolisiona ianao amin'ny alàlan'ny fitarainana ny zavatra ratsy rehetra; tratrarinao amin'ny fanaovana izany.
Noho izany, ampio ny famoahana ny tena revolisiona. Midira ao amin'ny demokrasia mivantana ary mizara ity tranonkala ity sy ny fangatahana azy: www.fvvd.nl
Lisitry ny rohy loharano: bnr.nl, telegraaf.nl
Ny famaritana vola lehibe mandritra ny krizy corona dia mitarika amin'ny hyperinflation: ny bitcoin ve no vahaolana?
Fanakatonana Coronavirus: lalàna momba ny vonjy taitra, lalàm-panorenana ary zon'ny fototra, izay tokony ho fantatrao, inona no azonao atao (ny lalàm-pitsaboana dia tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana)
Tags: krizy corona, Coronavirus, Featured, ara-bola, fijanonana fanofa, fampihenana trano, olana, governemanta, revolisiona, fanohanana, support packages, tozo, miasa tena, zzpers
21 May 2020 amin'ny 10: 25
Ny sivana Facebook farany indrindra: mbola manana mpanaraka ianao, saingy tsy afaka mametraka lahatsoratra intsony.
Toa efa vita ny pejy Facebook-ny: tsy afaka mandefa na inona na inona intsony aho!
21 May 2020 amin'ny 16: 48
Toa tsy fahombiazana ara-teknika izany na nitodika an'izany ry zareo ..
21 May 2020 amin'ny 12: 02
Ny scamdemic dia tsy maintsy ary hatsangan'ny serivisy governemanta / fiarovana.
Ny fampidirana ny fepetra tsy misy dikany sy tsy ara-drariny
Tsy miandry izy ireo. Tokana ny olon-tsotra
tsy mahalala ny zava-misy ary tsy tokony hieritreritra. Fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​saingy iza no maneno eo amin'ny fanompoana an'ny governemanta ary / na ny sisa miahiahy amin'ny 'asa' ataon'izy ireo na ny fanalana azy ireo.
Soa ihany fa miaina ao amin'ny firenena 'malalaka' isika.
Sainan'ny olona ny fanangonan-tsonia ankehitriny!
21 May 2020 amin'ny 12: 15
Ny tena tsy hitako dia ity dingana ity dia mifantoka amin'ny fampidirana tanteraka an'i Holandy ho faritany amin'ny EUSSR.
Ny GDR dia harbinger. fanandramana izay haroso ao amin'ny kaontinanta eropeana. Azonao jerena mazava izao hoe iza no mifehy an'ity fizotran'ny tetezamita ity, araka ny nomarihin'i JFK, milina manambatra ny zava-drehetra izy io ary miasa ao amin'ny "Lock Step".
Stasi Merkel, Vestager mpikambana ao amin'ny Trilateral, Von der Leyen, ary Timmerfrans dia mijery maso ary ankasitrahana. Ny dingana fandraisana mpiasa ho an'ny Stasi vaovao (Eurogendfor) dia afaka manomboka amin'ny ho avy.
21 May 2020 amin'ny 15: 26
misaotra Salmon! Tena dinidinika tsara,
Ny filoha France dia nanao fanadinana lehibe izay mazava.
NITADIAVITRA IZY (minitra 6; 19 tsy misy Gulag io tsy misy KGB "Nefa")
Minitra 4; 03 Ahoana no nahafantaran'i Gigscard d'Estain
21 May 2020 amin'ny 19: 52
Salama! I Macron ihany koa no nanandrana an'i Eurogendfor hanoherana ny hetsika “vests mavo”. Rehefa dinihina tokoa, fitsapana test-test ...
21 May 2020 amin'ny 15: 53
ho avy, fifantohana sy fahaiza-mandanjalanja (fff = 666)
Ohatra, ny dingana manan-danja noraisina amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny EUROGENDFOR sy ny iraka CSDP sivily, ary novolavolaina ny drafitry ny serasera hanamafisana ny fahitana ny EUROGENDFOR.
Amin'ity taona ity, ny foto-kevitra fototra amin'ny ho avy, fifantohana ary fahitsiana dia ho hita taratra ao amin'ireo tanjona napetrakay ny tenantsika.
Iray amin'ireo tanjona ireo, ary tena ilaina, dia ny hamaritana ny fomba fanitarana ny EUROGENDFOR amin'ny ho avy.
Midika izany fa tsy maintsy mijery ny fiaraha-miasa isam-paritra isika ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo antoko ivelan'ny EUROGENDFOR, toy ny mpiara-miasa sivily ary ny manampahefana eo an-toerana.
Ny fiarahana miasa mamela antsika hianatra avy amin'ny tsirairay.
Tamin'ity taona ity ity dia i Holandy ihany koa dia mitarika ny "International Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Status (FIEP)" ary ny Polisim-pirenena eropeana sy ny programa momba ny asa fanatanjahan-tena (EUPCST).
Hodinihintsika ny hahafahantsika manalalaka ireo fifandraisan'ireto fikambanana ireto ary hanombatombana ny fomba hanohanana ny fomba tsara indrindra.
Amin'izany toe-javatra izany dia mety ho naorina ny rohy miaraka amin'i FRONTEX.
Ireo ekipa manam-pahaizana manokana ireto dia tokony ho mora sy vonona hanaparitaka haingana ny toe-javatra krizy. Tsy maintsy ampidirin'izy ireo ny fahaiza-manao ilaina ho an'ny fandefasana ny EUROGENDFOR amin'ny ho avy.
Amin'izany fomba izany dia afaka mamaly ireo fandrahonana transnational sy ny fanamby amin'ny fomba mahomby isika.
Mbola hisy ny fitakiana bebe kokoa momba izany amin'ny ho avy.
Ankehitriny, ny foto-kevitra fototra amin'ny ho avy, fifantohana sy fahaiza-miaina (fff = 666) dia zava-dehibe kokoa noho ny taloha.
22 May 2020 amin'ny 12: 40
TOROHEVITRA: Ny drafi-piraisan'ny EU "Passport Vaccination" nanomboka tamin'ny taona 2018
Ny "tondrozotra momba ny vaksiny" dia mamaritra ny drafitra 3 taona hanamafisana ny "fahatokisan'ny vaksiny" sy ny fandrosoana ny "fanaraha-maso elektronika"
21 May 2020 amin'ny 12: 45
Nandritra ny taona maro izay, ny ankamaroany dia nitazona ny torimaso ary nandrahoina tao anaty valan-jaza dia sahirana aho nieritreritra fa ny vahaolana mahomby dia ho hita ara-potoana ho an'ny zavatra iray izay nitohy nandritra ny am-polony taona talohan'izy ireo.
Tena tsara raha mifantoka amina taranaka izay ho mafy indrindra amin'ity trangy ity. Z taranaka malaza Z, mpianatra manana trosa tsy misy fijery.
21 May 2020 amin'ny 13: 51
… Mandra-pahatongan'izy ireo eo anoloanao:
De Jonge: 'Karaha miady an-tery amin'ny politikam-panadinana vaovao tsy voahilika'
Raha tsy foana ny fiovan'ny lalàna ireo, dia mialoha ny governemanta:
21 May 2020 amin'ny 14: 16
Nanangona fifanarahana COVID-19 bebe kokoa i Palantir, tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny VA
Apple sy Google dia nandefa ny fampahafantarana API fampahafantarana fampahafantarana, manome alalana ny manampahefana ara-pahasalamana amin'ny famoahana ireo fampiharana
22 May 2020 amin'ny 00: 40
Ireto ny dingana 10 tokony hampiasanao, raha te hamadika otrik'aretina tsy mandreraka ianao ho lasa mpitondra eran-tany
1. Atombohy amin'ny otrik'aretina tsy voafaritra tsara, ampio fitsapana tsy marina momba izany ary ampaherezo ireo marary mararin'ny marary mafy na mitsivalana rehefa azo ampiharina.
2. Ampandreo ny isan'ny maty tsy azo ihodivirana be dia be ary hazavao tsara raha maty tamin'io otrik'aretina io ireo olona na miaraka aminy.
3. Mamorona 'valiny' momba ny 'krizy' izay manangana tambajotram-pahefana maro be, izay ny sasany dia efa nikasa nandritra ny fotoana kelikely, ary vitsy an'isa izay manana fampiharana azo atao amin'ny fisorohana ny valizy. (Hamarino tsara ny hanafoana ny fifidianana mandra-pahamarinana bebe kokoa ary hampiakarana ny herin'ny polisy fisamborana sy fanaraha-maso)
4. Atsaharo ny hopitalinao amin'ny rehetra fa afa-tsy 'raharaha covid'. Hanafoana ny fandidiana voafidy, ny dialisis ny voa, ny fitsaboana homamiadana, ny fitsidihan'ny GP mahazatra ary ny "fitsaboana tsy misy vonjy maika". Noho izany dia tsy azo ihodivirana ny fitomboan'ny antony rehetra.
5. Manova ny lalàny amin'ny fomba maro mba ahafahana saika maty amin'ireto maty rehetra ireto ny tsy hijerena ny fizahana sy ny fifandanjana ara-dalàna ary ho voamariky ny fizarana 'covid-19', na amin'ny fitsapana tsy marina na amin'ny alàlan'ny 'famelabelarana klinika' fotsiny.
6. Raha misy ny olona sasany manatrika medikaly dia tsy sahy hanaraka izany, manova ny lalàna hamela MD iray tokana, izay mety tsy nahita ny marary nanontany akory aza, mba hamantatra ny covid19 araka ny fahaizany azy.
7. Ampahafantaro ireo nomerao manaitra ny 'tranga vaovao' izay hitanao vokatry ny fanodinana isan-karazany ireo, ho toy ny porofon'ny maha-zava-dehibe ny fepetra vaovao ho an'ny «famonjena».
8. Raha tsy misy antony maneso anao dia ampidiro ny didy tsy tokony hisaraka (DNR) ho an'ny demografika izay heverinao fa tsy misy mihinana. (Raha toa ka manapa-kevitra momba ny fijalian'ny olombelona, ​​ny loharanom-pahasalamana voafetra sy ny mpanararaotra)
9. Aza adino ny manampy trangan'ny fahafatesan'ny covid19 rehetra.
10. Ataovy azo antoka fa miantso izay rehetra manontany momba ny ampahany amin'ny «teoriste mpiray tsikombakomba» ireo haino aman-jery.
23 May 2020 amin'ny 10: 41
Mahatsikaiky fa milaza ny momba an'i martien meiland ao amin'ny lahatsoratrao ianao. Manontany tena aho nandritra ny fotoana kelikely raha nosafidiana / noforonina an-tsaina izany anarana izany. Manana feo mitovy amin'ny anaranao izy io. Moa ve ho lasa lavitra tokoa ve izany, natao mba tsy hahafantarana ny anaranao amin'ny olona tsy fantatrao amin'ny olona miaraka amin'ny toetrany izay tsy asehon'i Martien Meiland?
Na dia hadalana aza; meiland dia manana loko roa samy hafa, ny vokatra chimeric amin'ny sary ...
23 May 2020 amin'ny 16: 48
Nanazava ny valin'ny fanonganam-bola ara-bola, izay mahatsikaiky momba ny dummies:
« Tsy afaka miditra ao amin'ny fivarotana intsony ianao raha tsy manome ny anaranao sy ny laharan'ny andevo ao amin'ny counter na dia vao manomboka fotsiny izany
I Maurice de Hond dia mahita ilay valiny tsy misy dikany (video) iray metatra sy sasany »
Total fitsidihana: 2.464.093
Camera 2 op Fa maninona no olona maro manodidina anao no jamba?
Riffian op iPhone dia manafina ny fampiharana covid-19 farany amin'ny fanavaozana i-OS 13.5 farany
clairvoyance op Fa maninona no olona maro manodidina anao no jamba?
ZalmInBlik op iPhone dia manafina ny fampiharana covid-19 farany amin'ny fanavaozana i-OS 13.5 farany